सार्वजनिक प्रशासन को दक्षता को विश्लेषण मा रहन को मानक को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। देश को अधिकारीहरु यसको उपयोगी स्रोतहरू, खनिज संसाधन सामग्रीहरू र मानव गतिविधि को सकल राष्ट्रिय उत्पादन नियन्त्रण छ। यो राज्य नागरिकहरु बीच धन वितरण व्यवस्थित छ। किन, केही देशहरूमा, धनी प्राकृतिक स्रोतसाधन, मान्छे तिनीहरूले आफ्नो जीवनको स्तर संग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? र यस्तो स्रोतहरू छैन कि छैन, अन्य राज्य के लोकप्रिय indignation थाहा छैन। भौतिक धन वितरण उपायहरूको तुलना लागि मापदण्ड कसरी पाउन?
यी उद्देश्यका लागि समाजशास्त्र मा विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग। तिनीहरूलाई को एक decile गुणक छ आय को भिन्नता को जनसंख्याको। यसलाई कम आय नागरिक नै नम्बरको जनसंख्या र आय डाटा को अमीर खण्ड को प्रतिनिधिहरु को आय 10% को तथ्याङ्क तुलना गरेर गणना गरिएको छ। विज्ञान, यो देश मा K 10 को मान को लगभग सामाजिक अशान्ति लागि अवस्था सिर्जना गर्ने मानिन्छ। मान्छे वर्तमान सरकार मा आफ्नो indignation व्यक्त गर्न सुरु हुनेछ, र disturbances सक्छ।
युरोप मा decile गुणक
यो अनुपात कम मूल्य स्वीडेन, डेनमार्क र फिनल्याण्ड छन्। यी देशहरूमा संख्या 3-4 को दायरा छ। उहाँले 5-7 फ्रान्स र जर्मनी मा मा खडा। को मा नगण्य विभिन्नता जनसंख्याको आय यी राज्य को एक अनुकूल सामाजिक जलवायु कायम गर्न मद्दत गर्छ। रूस मा, decile गुणक को 90 को दशक देखि निरन्तर वृद्धि देखाए। क्षणमा जनसंख्याको फरक खण्डहरूमा को आय खाली एक प्रभावशाली आकार पुगेको छ।
सबैभन्दा धनी नागरिक 15-20 पटक गरिब वर्गमा बढी छन्। र यो समाज को काम भागमा लागू हुन्छ। व्यक्ति छैन जाने गर्छ गणना काम गर्न अनिच्छा देखि गरिब को श्रेणी फसे। त्यसैले, रूस मा सबै आफ्नो जीवन काम छ जसले एक व्यक्ति पनि गरिब रहन संभावना छ। ताला उदाहरणका लागि, लाभकारी अधिकारी "Gazprom" गतिविधिहरु संग तुलना मा कुनै मूल्य छ, काम सरल। Decile गुणक हाम्रो देशमा अवस्थाको गठन गरेको छ भनेर देखाउँछ सामाजिक असमानता को र धन को गैर संतुलन वितरण।
ठूलो महत्त्व कारक को नकारात्मक पक्षहरू
प्रतिकूल आर्थिक कारक को बहुमत को शुरू भएको जनसंख्याको मुख्य रूप कमजोर तहहरू असर गर्छ। मुद्रास्फीति र संकट प्रक्रियाहरू उपयोगिता शुल्क मा वृद्धि, सार्वजनिक परिवहन सेवाहरूको मूल्य, साथै आवश्यक सामान को लागत प्रतिबिम्बित गर्दै हुनुहुन्छ। मूल्यहरु लागि लक्जरी सामान सानो दायरामा यो दायरा मा। साथै, कम आय नागरिक तथाकथित वित्तीय "सुरक्षा तकिया" छैन। तिनीहरू गम्भीर आर्थिक झटके पूरा गर्न पर्याप्त सामाग्री बचत छैन। जब जनसंख्याको यस्तो विभाग को राज्य मा सार्वजनिक बहुमत, सामाजिक अशान्ति लागि त अवस्था गठन। Decile अनुपात देखाउँछ छ।
व्यक्तिविशेष र कानुनी संस्थाहरू लागि सम्पत्ति कर कसरी गणना गर्न।
थर्मल चालकता गुणक सामाग्री। भवन निर्माण सामाग्री को थर्मल चालकता: तालिका
पत्रुस 1 र znaechnie को पृष्ठभूमि सुधार
नाप्ने ट्रांसड्यूसर: वर्गीकरण, आवेदन
रोग होंठ: कारण, लक्षण, उपचार
विभिन्न तरिकामा स्क्वास र आलु बाहिर राख्न? मूल व्यञ्जनहरु